Mayelana NATHI - Shijiazhuang Casiting Trading Co., Ltd.
Ikhwalithi ye-Cast Diamond, Dala Impilo Enhle!
IShijiazhuang Casiting Trading Company ingumhlinzeki oqeqeshiwe ogxile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuphonsa. Singakhiqiza futhi sinikeze izinhlobo ezahlukahlukene zokuphonsa insimbi, ukusikeka kwensimbi / impunga yensimbi, ukusakazwa kwe-aluminium okunesisindo somkhiqizo kusuka kumakhilogremu ambalwa kuya kuma-10000 kilograms.
Imboni yethu ihlanganisa indawo engaphezu kwe- Amamitha ayisikwele angama-50000, futhi inani lokukhiqiza eliphelele labalingisi abahlukahlukene liyedlula Amathani ayi-30,000 / ngonyaka, Kuyibhizinisi elihamba phambili ekukhiqizeni imishini yamalahle emayini yamalahle eChina. Sinenani eliphelele elingaphezu kuka-500 abasebenzi kubandakanya unjiniyela ohlukahlukene wokulingisa, ochwepheshe, abasebenzi abasebenza ngobuchwepheshe abanamakhono, abasebenzi bezokuphatha. Sinemigqa emibili yokubumba okuzenzakalelayo: eyodwa ingumugqa wokukhiqiza wokubumba we-VRH, enye ingumugqa wokubumba wokukhiqiza isihlabathi. Inqubo yokulingisa isebenzisa isoftware yokulingisa isoftware, engalingisa inqubo yokusakaza ngokushesha, ngokunembile nangokuqonda. Imishini yokuncibilikisa ifaka isithando somlilo kagesi, isithando somlilo esiphakathi nendawo kanye nesithando sokucwengisisa se-LF. Imishini yokwelapha ukushisa ifaka isithando somlilo sedeskithophu nesithando segesi, konke okulawulwa uhlelo oluzenzakalelayo. Silahlekelwe futhi yimishini yokusakaza amagwebu kanye ne205Kg I-cast iron entsha yokuhlola impahla esetshenziswayo, engabona isivivinyo ekukhiqizweni okukhulu kokuphonswa kwezinto ezahlukahlukene.
Ifektri yethu inezinto zokuhlola eziphelele nezizimele. Ukuhlolwa okwenziwa esizeni kufakwe i-vacuum eqonde ngqo lapho kufundwa i-emission spectrum analyzer, umhloli wokulinganisa oxhumanisa kathathu, umtshina omkhulu wezinhlayiya ezimanzi, umtshina wesici se-ultrasonic, kanye nomtshina wokungena kombala ongena ngaphakathi. Nge-full-featured sanding laboratory kanye nesikhungo sokuhlola, singafinyelela ukulawulwa kwekhwalithi eqinile kuzo zonke izici kusuka kuzinto zokusetshenziswa, izinqubo zokukhiqiza ukuya kwimikhiqizo yokugcina.
Iqhutshwa ngumqondo wemikhiqizo eluhlaza nehlanzekile njengesiqondiso sefektri yethu, sakha uhlelo olusezingeni eliphakeme, olusebenza kahle, olusetshenziswa kancane, oluhlanzekile, oluguquguqukayo, sisebenzisa izinto zokuphonsa ezivuseleleka kalula futhi ezingasetshenziswa kabusha nezinqubo zokuphonsa. Isistimu yokususa uthuli esezingeni eliphakeme ivikela impilo yomkhakha wesisekelo futhi inciphisa kakhulu ukungcoliswa kokusakazwa kwemvelo. Ifektri yethu iyinkampani yasekhaya yasekhaya "ekilasini enobungcweti enobungani" futhi i- "China Green Casting Demonstration Enterprise" ekhethwe yiChina Foundry Association.
Imikhiqizo yethu yokusakaza ehlukahlukene ithunyelwe emazweni amaningi nasezifundeni zomhlaba ezifana ne-United States, iBrithani, iVietnam, iBangladesh, i-Australia, iTurkey njalonjalo.
Silangazelele ukubambisana namakhasimende amasha namadala ukuthola isimo sokuwina!